सुष्माको लाइभ - मनोरञ्जन समाचार - प्रकाशितः जेष्ठ १९, २०७५ - साप्ताहिक
कुनै बेला यस्तो पनि थियो, अभिनेत्री सुष्मा कार्कीको आइटम नृत्य हेर्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा अचाक्ली भीड लाग्थ्यो । चलचित्रको अफर धमाधम आउँथ्यो भने स्कृप्ट पढ्न भ्याइ–नभ्याइ हुन्थ्यो । सुष्मा पनि रोजेर मात्र चलचित्रमा काम गर्थिन् । उध्रेको चोली छ है त्यै पनि लाइन्छ गीतमा गरेको नृत्यले सुष्माको क्रेज एकाएक बढाएको थियो । उक्त गीतले उनलाई देश–विदेशका सांस्कृतिक कार्यक्रमसम्म पुर्‍यायो ।
समय सधैं आफ्नो काबुमा कहाँ हुने रहेछ र ? सुष्मालाई आजभोलि न चलचित्रको प्रस्ताव आउँछ, न फोटोसुटको । न त अन्तर्वार्ताका लागि मिडियाले नै खोज्छ । अनि काम के भो त ? घरमा बस्ने अनि फेसबुक लाइभमा आएर दिन बिताउने । सामाजिक सन्जाल के कसरी चलाउने भन्ने कुरा सुष्मालाई पक्कै थाहा छ ।
यद्यपि उनी आजभोलि आफू सुत्ने बिस्तरामा बसेर विभिन्न पोजमा लाइभ गर्छिन्, जसको कतिपयले आलोचनासमेत गरेका छन् । यद्यपि सुष्माको लाइभमा रमाउनेहरू पनि उत्तिकै छन्, तर धेरैले के भन्छन् भने– सुष्माले नितान्त व्यक्तिगत कुरा सामाजिक सञ्जालमा सेयर नगरेकै राम्रो !